Neodymium Magnet Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Neodymium Magnets Factory
Neodymium Ring Magnet oo leh Zn Dahaadhida Codsiyada Codbaahiyeyaasha, Magnets Speakers
Si aad uga hesho dhawaq wanaagsan afhayeenka, magnet xoog leh, neodymium magnet, ayaa si ballaaran loo isticmaalaa. Neodymium ring magnet wuxuu leeyahay awooda ugu weyn ee aagag walboo joogto ah oo la yaqaan. Sameecadaha sameecadaha sameeyayaasha ayaa u adeegsada si ay ugu haboonaadaan kuwa ku hadla cabirro kala duwan iyo si loo gaaro noocyo kala duwan oo tayo leh
Neodymium Bar Magnet oo leh godad Countersunk
Neodymium Countersunk Bar Magnet wuxuu ka kooban yahay joogteyn sare, heer kul heer sare ah oo shaqeynaya oo joogto ah, iyo caabbinta daxalka u fiican Godadka sagxadda hoose waxaa loo isticmaalaa in lagu qodo maadooyinka.
Neodymium Magnet-ka aan caadiga ahayn oo leh Dahaarka Epxoy Black
Neodymium Irregular Magnet waa qaab loo habeeyay. Waxaan awood u leenahay soo saarida iyo farsameynta cabirro kala duwan iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.
Neodymium Block Magnet, Qaab-dhismeedka NdFeB Magnet N52 Fasalka
Neodymium Block / Magnetic Magnetka waxay leeyihiin xoog aad u balaaran soo jiidasho leh sababtoo ah cufnaanta tamarta oo aad u saraysa. Waxay u dhaxeysaa N35 ilaa N50, laga bilaabo N Series ilaa UH Series markii la codsado.
Neodymium Disc Magnet, Wareegga Magnet N42, N52 ee Codsiyada Elektaroonigga ah
Magnet-ka 'Disc magnets' waa qaab wareegsan waxaana lagu qeexay dhexroorkoodu inuu ka weyn yahay dhumucdooda. Waxay leeyihiin dusha sare, fidsan iyo sidoo kale aag ballaadhan oo magnet ah, iyaga oo ka dhigaya xulashada ugu habboon dhammaan noocyada xalalka birlabta ee xoogga leh oo wax ku ool ah.